You are here: Home somal Tartan Loogu Magac Daray SAYVO Cup Oo Maanta Burco Lagu Soo Gabagabeeyey
Tartankan oo uu ku guulaystay koox ku ciyaaraysay Baarsiigo Ayaa Xafladayaa munaasibad wayn oo lagu qabtay hoolka shirarka ee SAYVO oo ay kasoo qaybgaleen masuuliyiinta wasaarada waxbarshada Gobolka iyo Madaxda Hayada Wadaniga Ah Ee SAYVO iyo 20kii koxood ee uu tartankaasi u socday.
Waxaana halkaasi ka hadalay Liban Axmed Bile Oo ku hadlaayey afka hayadda wadaniga ah ee Sayvo Oo iyadu soo qabanqaabsisay ciyaarahaasi ayaa sheegay inay ka haayad ahaan ku hawlanyihiin sidii ay uga qaybqaadan
lahaayeen isdhex galka bulshada iyo tayada aqomeed ee bulshada reer somaliland isagoona intaasi raaciyey inaanay hayadu ku koobnayn oo kaliya ciyaaraha balse ay ka caawiso bulshoda xaga waxbarshada iyo farsamada gacanta.
Masuul ka socday wasaarada waxbarshada ayaa isna dhankiisa uga mahadnaqay hayadda SAYVO sida ay u dardar gelinayso dhalinyarada isla markaana ay ugu furayso tartan ciyareed ay ka fieed waxyaalo badan oo aan halkan lagu soo keebi karyn waa sida uu hadalka u dhigay ee.
Gabagabadii waxaa halaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyada iyo ciyaaraha isagoona wax lagu farxo ku timaamay 20 koxood oo heerka sadexaad ah oo mudo bil ah tartan u socday haatana u soo gabagaboobay isla markaana ay maanta meel wada jogaan iyadoo ay guushu raacday xoox khaliya, waxaana uu intaas ku daray ianay ku faraxsanyihiin sida ay hayada SAYVO Uga qaybqaadanayso horu marinta bulshada dhinacyo kasta haday tahay waxbarshada,ciyaaraha,farsamada gacanta iyo arimo kaloo aad u tiro badan.
Gabagabadii waxaa halkaasi qalab dirays iyo cobab ba lagu gudoonsiiyey ciaaryahanadii ugu laacibsanaa,ugu akhlaaq wanaagsanaa,ugu gool wacnaa iyo kooxdii ku guulaystay koobkaasi.
Maaha Markii Ugu horaysay hayadda SAYVO ay tartan noocan oo kalaa u qabato dhalinyarada ku dhaqan magaalada burco.
Waxaana ay had iyo jeer horseed ka tahay dhinacyada horu marinta waxbarshada ayadoona dadaal ugu jirta sidii uu gobolkani u noqon lahaa mid ka haqabtirma waxbarshada.